Maxkamad kutaalo London oo Xukun ku riday nin lagu eedeynayo falal xagjirnimo ah – The Voice of Northeastern Kenya
Maxkamad kutaalo London oo Xukun ku riday nin lagu eedeynayo falal xagjirnimo ah
Maxkamada magaalada London ayaa Salaasadii shalay xukun ku riday Wadaadka lagu tuhunsan yahay falalka Xagjirka ah ee lagu magacaabo Anjem Choudary oo tan iyo bishii Luulyo dacwadiisa socotay.
Anjem Choudary oo ku dhashay dalka Ingiriiska ayaa tan iyo sanadkii 1999 kamid ahaa xubnaha taageerada u muujiya kooxaha hubeysan ee xagjirka ah waxana lagu eedeeyey in uu taageero siiyey kooxda Daacish.
Choudary ayaa inta badan mudaharaadyo ka dhigi jiray magaalooyinka waaweyn ee dalka Ingiriiska, isla markaana telefishanada ka difaaci jiray qaar kamid ah kooxaha hubeysan sida Talibanka.
Dacwada ugu danbeyntii uu ku muteystay Maxkamada ayaa ah in uu si toos ah u taageeray kooxda Daacish, isagoo sheegay in uu beeco siiyey hoggaamiyaha Kooxdaasi ee Abubakar Al Baqdaadi, arrintan oo ka hor imaaneysa sharuucda dalka UK ee qoraya in ay mamnuuc tahay taageerida koox ku lug leh falal argagixiso.
Jaaliyadaha Muslimiinta iyo masaajidada waaweyn ee ku yaala dalka UK ayaa horey isaga fogeeyey ninkan iyo kooxda uu hogaamin jiray oo lagu eedeeyey inay dhalinyaro badan oo muslimiin ah ka dhaadhiciyeen in ay u dagaal aadaan Bariga Dhexe iyo waliba dalalka Afrika sida Soomaaliya.
Maxkamada ayaa ku xukuntay 5 sano iyo Bar, Qareenka u doodayey Anjem Choudary ayaa ka codsaday garsooraha in uu xukunka ka khaafifiyo ninkan isla markaana sheegay in Anjem Choudary uu ka xun yahay in uu si toos ah u taageeray kooxda Daacish, balse Garsooraha ayaa sheegay in uusan aaminsaneyn in ninkaasi uu wax ka bedali doono fikirkiisa xagjirnimo.
← Nin lagu tuhunsan yahay falal argagixiso oo gacanta booliska ku sii jiri doona
Maamulka Degmada Lagdheeraa oo jawaab ka bixiyay cabasho dhanka biyaha ah oo kasoo yeertay shacabka Madogashe →